ယခုသုတေသနအစီအစဉ်မှာ သူငယ်ချင်းရဲ့အတွေးအမြင်တွေကို ပါဝင်ဆွေးနွေးလိုပါသလား?
ကျွန်တော်/ကျွန်မက အခုချိန်မှာ -
အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင် သူငယ်ချင်းရဲ့ ယခုလက်ရှိအလုပ်က -
အနာဂတ်မှာဆိုရင်ရော ဘယ်လိုအလုပ်တွေမှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လိုပါသလဲ ?
သူငယ်ချင်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ ကိုယ်တတ်မြောက်ထားတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် ကိုယ်မျှော်မှန်းထားတဲ့ အလုပ်ကို ရရှိနိုင်တယ်လို့ထင်ပါသလား ?
မရနိုင်ဘူးဆိုရင် ဘယ်အချက်တွေကြောင့်လဲ ?
သူငယ်ချင်းရဲ့ယခုလက်ရှိ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးပြီဆိုရင် အနာဂတ်မှာ ကိုယ်အမှန်တကယ်လုပ်မယ့် အလုပ်က ဘယ်လိုမျိူးလဲ ?